Singa 4 hitarihana ny taranaka mitarika amin'ny marketing automatique | Martech Zone
Research from Fandinihana automatique an'ny Venturebeat dia manondro fa, ankoatry ny fanavahana ny endri-javatra amin'ny sehatra tsirairay, ny fanamby lehibe indrindra amin'ny automatisation marketing ho an'ny orinasa dia ny fahafantarana ny fomba mifanaraka amin'ny fikambanan'izy ireo.
Angamba izany no olana… ezahin'ny orinasa atao mendrika marketing automatique fa tsy mitady sehatra efa nifanaraka tamin'ny fizotrany anatiny, ny tanjany ary ny fananany. Sasatry ny aho tsara indrindra amin'ny lisitry ny automatisation marketing na ny fomba quadrant aza. Rehefa misafidy mpivarotra ho an'ny mpanjifantsika izahay dia manombatombana ny lafiny rehetra amin'ny fikambananany hahitana ny sehatra mety - na ny vahaolana mety ahafahana mampiditra ireo sehatra mety. Mora kokoa ny manangana vahaolana noho ny manova ny dingana sy ny kolontsain'ny fikambanana iray manontolo.
Izany dia nilaza fa mbola misy taratrafm fotoana mety amin'ny fampiasam-bola amin'ny sehatra automatisation marketing. Ireto misy singa 4 izay nasongadin'ny TechnologyAdvice izay mitondra ny valin'ny taranaka mitarika:
Fiaraha-miasa amin'ny Sales - afaka miteraka fiakarana 20% amin'ny fotoana varotra.
Fanentanana mitete amin'ny mailaka - Ny mailaka dia 3x kokoa noho ny media sosialy.
fiantsonana Pages - ny fampiasana automation miaraka amina pejy fananganana dia mety miteraka taham-panovana hatramin'ny 50%.
Personalization sy fitsapana A / B - ny mailaka manokana dia miteraka 6x ny vola miditra raha ampitahaina amin'ny mailaka tsy miankina aminy.
Tags: ab testingfampielezana dripfampielezan-kevitra mitete amin'ny mailakapejy pejytaratrafmpersonalizationfiaraha-miasa amin'ny varotra